Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha oo maanta booqday Wasaaradda Waxbarashada iyo Dugsiga H/dhexe iyo Sare ee Xamar Jajab + Sawiro
Updated About:367 days ago 0
Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ahna Wasiirka ganacsigga Mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Kaliif oo maanta booqday Wasaaradda Waxbarashada ee Xukuumadda Soomaaliya iyo dugsiga H/dhexe iyo Sare ee Xamar Jajab kaasoo ay wax ka bartaan 590 arday kuwaasoo si lacag la’aan ah wax ku barta.
Ugu horeyn Wasiirka Waxbarashadda ayaa uga warbixiyaya Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha Waxqabadka Wasaaradiisa islamarkaana mid mid u galay Xafiisyada Wasaaradda Waxbarashadda.
Wuxuuna Wasiirka Waxbarashada Xukuumada Soomaaliya Axmed Ceydiid Ibraahim sheegay in wasaaradiisa ay hormar ka sameysay dhanka waxbarashada, Isagoona tilmaamay in qaar ka mid ah Iskuulada Muqdisho ay hoos yimaadaan Wasaaradiisa ayna dowladdu maamusho islmarkaana si lacag la’aan ah wax looga baro.
Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga mahadceliyay Wasiirka Waxbarashada howlaha muhiinka ah oo ay wasaaradiisa gacanta ku heyso.
Dhinaca kale, Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Waxbarashada ayaa booqday dugsiga Hoose, Dhexe iyo Sare ee Xamar Jajab, Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay Maamulka dugsiga, Macalimiin iyo ardey aad u fara badan.
Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha ayaa mid mid u gacan qaaday ardaydii, Isagoona mid mid u galay fasalada Ardayda.
“Dowladdu waxay ahmiyad gaar ah siineysaa waxbarashada oo ah aas aaska bulshada, waxaadna la socotaan in ummad kasta ay horumarkeeda ku xirantahay heerka aqoonteeda, Waxaad tihiin Mustaqbalkii dalka”.
Ugu dambeyntii Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka ganacsigga ayaa ardayda u sheegay in ay yihiin kuwii mustaqbalka dalka madaxda u noqon lahaa, Dhaqaatiirka noqon lahaa, Macaliiniinta noqon lahaa Islamarkaana waxaa tihiin kuwii la tartami lahaa adduunyada kale, Isagoona xushay in dowladii 1991- dhacday in madaxda hadda ay yihiin kuwii waxka soo barta oo waliba si lacag la’aan ah ku soo bartay sida hadda idinka oo kale walina aad si lacag la’aan ah wax ku sii baran doontaan.